Dr. Gaas iyo Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Bari oo Talo Mideysan Ka Qaatay Kacdoonka Gobolka Bari. | Puntland Online
Madaxweynaha Puntland Dr. Gaas ayaa markuu ku soo labtay gobolka Bari wuxuu si deg deg ah ula kulmay Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Bari C/xakiin Yuusuf Xuseen waxayna si hoose uga wada hadleen xaalada kacsaan ee gobolka Bari ka jirta.
Warbixintii taliyuhu wuxuu ku sheegay in ay reer Barigu wadaan kacdoon qorsheysan oo laga hagayo magaalada Garoowe iyo Muqdisho ayna hormuud u yihiin rag siyaasiyiin hore ahaa oo ka soo jeeda beelaha Cali Saleebaan, Dishiishe iyo Cali Jibraahiil, sida Gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Mr. Gallan, Siciid Maxamed Raage oo xilal wasiirnimo ka soo qabtay maamuladii isaga danbeeyey Puntland iyo rag kale oo fara badan.
Taliyuhu wuxuu warka ku daray in ay jirto calaamad colaadeed oo lagu dhiftay beesha Cumar Maxamuud iyadoo ganacsatada ay soo wajahday cabsi ay ka qabaan in boob loo geysto hantidooda.
Taliyuhu wuxuu talo ku soo jeediyey in goobaha ganacsiga ee beesha Cumar Maxamuud la geeyo ciidamo dowladeysan, hubeysan isla markaasna tababaran.
Madaxweynaha Puntland ayaa isaguna wuxuu talo ku soo jeediyey in arrinta ku wajahan beesha Cumar Maxamuud ay tahay mid khatar ah, loona baahan yahay in la Mudugeeyo ama la Maxamuud Saleebaaneeyo
Taladaas ayaa noqotay mid biyo kama dhibcaan ah, waxaana shalay markiiba casumaad loo fidiyey beelaha Reer Biciidyahan.Reer maxamuud iyo Laylkase oo ah beelo asal ahaan ka soo jeeda gobolka Mudug.
Warar hoose oo laga helayo shirkaas ayaa sheegaya in beelahaasi ay beesha Cumar Maxamuud u sheegeen in ay ogolaadaan in ay deegaana uga danbeeyaan dadka loogu yimid, xaqoodana ay ka daayaan boobitaanka.
Waxay Labadan beelood xuseen in magaalada Gaalkacyo uu dhowaan dagaal xumi ka dhacay kaasoo salka ku haya awood qaybsiga Gal Mudug iyo Puntland iyo weliba sidii loo wadaagi lahaa kheyraadka gobolka, taasoo ay eedeeda saareen Madaxweynaha iyo jifidiisa, waxayna ka digeen in aan Boosaaso aysan noqon sidii Gaalkacyo oo kale.
Waxaa kulankaas lagu soo qaaday af-lagaadadii Taliyaha Qaybta Booliska gobolka Bari uu marar dhowr ah warbaahinta u mariyey beelaha gobolka oo uu marna caruurtooda ku sheegay in ay yihiin Furuukh, marna uu reer bariga ku tilmaamay bisado afka ku qaadan doona caruurtooda, waxayna beesha Cumar Maxamuud kula taliyeen in gebi ahaanba ninkaas la bedelo.
Dhinaca kale, beelaha gobolka Bari ayaa gebi ahaanba diiday in ay si gooni gooni ah ula kulmaan madaxweyne Gaas, waxaana horgalada siyaasada C/weli 24 saac ee la soo dhaafay ay wadeen dadaal ay doonayeen in ay ku kala dhantaalaan midnimada beelaha gobolka oo meel qura ka soo wada jeeda, waxayna kala kulmeen diidmo iyo weji gabax.
Xaalada siyaasadeed ee dowladda Gaas ayaa u muuqata mid aan cago adag ku taagneyn, waxaana jira welwel ay waxgaradku ka qabaan in xaalalda magaalada Boosaaso ay isu rogto fowdo iyo colaad haddii uu Madaxeyne Gaas ka tanaasuli waayo waxa bulshadu diidan tahay.